Qarax Ka Dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho. – Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Duleedka Magaalada Muqdisho.
Saacadihii lasoo dhaafay waxa uu qarax culus ka dhacay deegaanka Tareedisho ee duleedka magaalada Muqdisho’iyadoona dhawaaqa qaraxa laga maqlay qeybo ka mid ahÂ duleedka magaalada Muqdisho.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago waxey haleeshay gaari nooca Cabdi Bilaha ah oo ay la socdeen maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka gaar ahaan kuwa nabadsugida.
Mid ka mid ah dadkii xilliga qaraxa goobta ka agdhawaa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gabi ahaan gaariga uu burburay’waxa uu intaasi ku daray goob joogaha in maleeshiyaatkii dowlada ee gaariga la socday intooda badan dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi.
Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxa culus ee lagu dilay tiro ka tirsan maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Tareedisho ee duleedka magaalada Muqdisho.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 07-08-1437 Hijri.
Next: Ururka Xasan Nasrullaah Oo Xaqiijiyay In Sarkaal Sare Looga Dilay Dhulka Shaam.